हिटरको तातोमा तड्पिइतड्पिई सकियो इञ्जिनियर दम्पतीको जीवन
December 31, 2018 खबर खुराकLeaveaComment on हिटरको तातोमा तड्पिइतड्पिई सकियो इञ्जिनियर दम्पतीको जीवन
काठमाडौं, १६ पुस । अवकाशप्राप्त सचिव भीम उपाध्यायले फेसबुकमा लेख्नु भयो, ‘आगलागीबाट गम्भीर घाइते भई उपचाररत् ई. पुष्कर जोशीको निधन भएको छ । दिवंगतप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि । आगलागीमा गम्भीर घाइते भएका उपचाररत् जोशीकी पत्नी ई. अप्सरा र नाबालक पुत्रको शिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना ।’
२२ हजार भन्दा बढी फलोअर रहेको उपाध्यायको फेसबुक आफैँमा ‘इन्फरमेटिभ’ छ । राज्यका नीतिनियमदेखि सर्वसाधारणको जीवनशैलीसम्ममा काम आउने सूचना उपाध्यायले ‘मनमौजी’सँग पोष्ट गर्नु हुन्छ । देश ‘पुनर्निमाण’ युगमा छ । पुनर्निर्माणको काममा यिनै इञ्जिनियर काम आउँछन् । यहाँ त इञ्जिनियर दम्पती नै आगलागीमा परेको खबर थियो ।
उनै उपाध्यायले फेरि अर्को स्ट्याटस लेख्नु भयो, ‘आगलागीबाट गम्भीर घाइते भएकी सडक विभागकी ई. अप्सरा श्रेष्ठको उपचारक्रममा निधन भएको छ । श्रद्धाञ्जलि । उनीसँगै सोही घटनामा घाइते भएका पति ई. पुष्करको पनि ४ दिनअघि निधन भएको थियो । दुवैको बैकुण्ठबास होस् ।’
एउटा इञ्जिनियर दम्पतीको गुमनाम मृत्यु । वश सामाजिक सञ्जालमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलिमा सीमित छ । भैरहवामा रहेका उपाध्यायसँग फेसबुकमै सोधेँ, के घटना यो ? उहाँले ‘आगलागी’ भन्नु भयो । ग्यास सिलिण्डरको कुरा गर्नु भयो । उपाध्यायले म नजिकका मान्छे हुँ भन्नु भयो र एउटा इञ्जिनियरको नम्बर दिएर कुरा गर्न भन्नु भयो ।
काठमाडौंमै डेरामै जले इञ्जिनियर दम्पती
पुसको ठिहि¥याउने काठमाडौं अनि साँझ ६ बजे । जाइकामा कन्सल्टेन्ट रहेका इञ्जिनियर पुष्कर जोशी र सडक विभागमा कार्यरत इञ्जिनियर अप्सरा श्रेष्ठ कार्यालयबाट काम सकेर कोठामा आए । कोठामा ग्यास जोडिएको हिटर तापे । प्याक गरेर ल्याइएको मःम खाए । साथमा डेढवर्षको छोरा पनि थिए । तर त्यही मःम नै यी जोडीको ‘अन्तिम भोजन’ बन्यो । डेराको बास । खोइ कतिखेर कसको नियति कतिखेर के पो हुन्छ ?’
भीम उपाध्यायले नै नम्बर दिनु भएका इञ्जिनियरसँग कुराकानी भयो । इञ्जिनियर दिनेश भट्टले भन्नुभयो, ‘पैसाले मात्रै मान्छे काठमाडौंमा बाँच्दैन रहेछ सर ।’ छोटो कुराकानीमा निकै भावुक भन्दै भट्टले भन्नु भयो, ‘राज्य संयन्त्र यस्तो विषयमा गम्भीर भएन भने यस्ता कयौँ मृत्यु समाजमा ‘गुमनाम’ र परिवारलाई जीवनभर ‘पीडाको बोझ’ बनिरहने छ ।’
भट्ट भन्नुहुन्छ, ‘यो अनुमान मात्रै हो हाम्रो, तर यो पीडा हामी कहिल्यै भुल्न सक्दैनौँ ।’ साँझ ६ बजेतिरको घटना । इञ्जिनियर दम्पती डेरामा आए । हिटर तापेर मःम खाँदै थिए । सायद ग्यास लिक भयो र आगलागी भयो । ढोका बन्द थियो । भट्टले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अनुमान हो, उनीहरु ग्यास लिक भएर आगलागी भएकै कारण जलेर मरे, सिलिण्डर विस्फोट भएको छैन, बेड जस्ताको तस्तै छ । तर पुष्कर र अप्सरा आगोको लप्कामा जलेका छन् । डेढ वर्षको छोरो पनि जलेको छ ।’ हिटर पनि त्यही दिन बनाएर ल्याइएको छिमेकीहरुले सुनाए ।
‘साँझ भएको घटना, डेराभित्र के भयो, छिमेकी र घरबेटीले पनि चासो दिएनन् । डेरा हेर्दा झ्याल फुटाउन खोजेको देखिन्छ । ढोकापट्टि नै हिटर भएकाले समस्या परेको देखिन्छ,’ भट्टले भन्नु भयो, ‘अन्तिम अवस्थामा गुहार मागेको देखिन्छ, वरपरकाले पनि सुनेको हुनुपर्छ तर भइदिएछ के भने, ‘चोर आयो’ भन्ने सुनेर वरपरकाले झन ढोका बन्द गरेर बसेछन्, समयमा उद्धार नभएर बचाउन सकिएन भन्ने मन थक्कथक्क भइरह्यो ।’ घरबेटी र डेराका छिमेकीहरुले सजगता अपनाउनु पर्ने यो घटनाले सिकाएको छ ।
समयमा उद्धार भएन
वरपर हल्लीखल्ली भयो । ढोका समयमा खुलेन । ग्यासले जलेर उनीहरु गम्भीर घाइते भएका थिए । ‘पुष्करको दुवै हात हागोको मुस्लोमा परेको देखिन्छ, दुवै हात काटिएपछि उसको मृत्यु भयो,’ भट्टले सुनाउनु भयो, ‘यस्तो घटना नेपालमा कमै हुन्छ तर हाम्रो उपचार प्रणाली यस्तो रहेछ कि, पैसा भएर पनि मान्छे बाँच्न गाह्रो रहेछ काठमाडौंमा ।’
थप्नुभयो, ‘पुष्कर दम्पतीको उद्धार हुनु पर्नेमा घटना पहिला प्रहरीमा पुगेछ । नजिकैको एउटा भाइ उद्धारका लागि तयार हुँदा र प्रहरी आइपुग्दा उस्तै–उस्तै समय भएछ । उद्धारमा निकै ढिला भयो भन्ने लाग्यो ।’
आगलागी पीडितलाई पहिला स्लाइन जरुरी
यो घटनाले सिकाएको अर्को पाठ हो, आगो लागेको मानिसलाई पहिला स्लाइन चढाउनु पर्छ । ‘आगोले शरीरको रगत र पानीको मात्रा सकाउँछ, किड्नीमा असर गर्छ । त्यसैले सक्दो चाँडो पानी दिनु पर्छ,’ इञ्निनियर भट्टले भन्नुभयो, ‘उनलाई तत्काल केही बोतल स्लाइन चढाइएको भए बाँच्ने आसा थियो ।’
आगोले पोले कीर्तिपुर अस्पताल जाउँ
काठमाडौं उपत्यकामा आगोले पालेको उपचार हुने अस्पताल हो कीर्तिपुर अस्पताल । काठमाडौंको एउटै मात्र अस्पताल, जहाँ आगोले पोलेको विशेष ढंगबाट उपचार हुन्छ । पुष्कर दम्पतीलाई पनि कलंकीमा भएको घटनापछि नजिकको अस्पताल लगियो । उनलाई शुरुमै कीर्तिपुर अस्पताल पु¥याउन सकिएको भए हुनेथियो । ‘पलपलमा यसो भएको भए बाँच्थ्यो कि भन्ने ‘होप’ले पा हामी तड्पिइरहेका छौँ,’ इञ्जिनियर भट्टले भन्नुभयो, ‘समयमा कीर्तिपुर अस्पताल त पु¥याउन सकिएन नै, स्लाइन पनि चढाइएन, उल्टो त्यहाँबाट कीर्तिपुर अस्पताल लैजान पनि बिलिङ र अरु कागज मिलाउँदा ४ घण्टा ढिलो भयो ।’
कीर्तिपुर अस्पतालमा ‘डायलाइसिस’ छैन
अनेक व्यवधानबीच पुष्कर दम्पतीलाई कीर्तिपुर अस्पताल लगियो । उनलाई डायलाइसिस गर्नु पर्ने भयो । तर दुःखको कुरा आगलागी पीडितको विशेष अस्पतालमै डायलाइसिस सेवा रहेनछ । त्यहाँ पनि पुष्करको उपचारमा फेरि व्यवधान भयो । आगोले पोलेको पीडामा आफ्ना सहकर्मी अचेत भइरहँदा हरसम्भव प्रयास ग¥यौँ तर १२ गते बिहान पुष्कर बिते,’ भट्टले भन्नुभयो ।
भरपर्दो छैन एयर एम्बुलेन्स सेवा
मेडिसिटी अस्पतालमा अप्सरालाई लैजाँदा तेस्रो अस्पताल ‘चेन्ज’ थियो । अर्थात् निकै ढिलो भइसकेको थियो । मेडिसिटीमा भारत लैजाने सल्लाह भयो । इञ्जिनियर सर्कलमा नाम चलेका दम्पती थिए । खर्च साथीभाइले जुटाएकै थिए । मुम्बइमा अग्निपीडितको उपचार राम्रो हुने खबरपछि त्यहाँ लैजाने तयारी भयो । दम्पतीका लागि दुई वटा ‘एयर एम्बुलेन्स’ पनि जोहो भयो । त्यो पनि ४० लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी । तर फेरि आइलाग्यो व्यवधान । ‘मेडिसिटीबाट विमानस्थलसम्म पु¥याउने, त्यहाँबाट एयर एम्बुलेन्समा इन्धन भर्ने काम गर्दा अरु ४ घण्टा उपचारविहीन हुँदा झन कठिन हुने बताए उपचाररत चिकित्सकहरुले ।’ ‘चार घण्टा बाहिर राख्न बिरामीलाई गाह्रो हुन्छ भने,’ भट्टले फेरि दोहो¥याउनु भयो, ‘पैसा भएर मात्रै मान्छे कहाँ बाँच्न बचाउन सकिँदो रहेछ र ?’ उपचारक्रममै अप्सराको पनि १५ गते निधन भयो ।
जाइकामा कन्सल्टेन्ट पुष्कर वैतडीका हुन् । उनी दोगडाकेदार गाउँपालिकाका हुन् । अप्सरा तनहुँ डुम्रेकी हुन् । ‘दुवै ‘पायोनियर इञ्जिनियर’ हुन्,’ भट्टले भन्नुभयो, ‘प्रेम विवाह भएको थियो, एउटा सन्तान थियो, हासिखुशी जिन्दगी पीडैपीडामा छट्पटिएर सकियो ।’ उनीहरुको डेढवर्षीय छोरा खतरामुक्त छन् । उपचार जारी छ ।
पैसा जुटेकै थियो
इञ्जिनियर दम्पती अस्पताल भर्ना भएपछि इञ्जिनियर सर्कलले उपचारका लागि सक्दो दौडधूप गरेको थियो । ‘पैसा पनि जुटाएका थियौँ, समस्या थिएन,’ भट्टले भन्नुभयो, ‘अप्सराकी बुबाले खातामा सहयोग जुटिरहेको छ भन्नुभएको थियो तर दुवैलाई बचाउन सकेनौँ ।’ फेरि दोहो¥याउनु भयो, ‘पैसाले मात्रै काठमाडौंमा मान्छे बाँच्दैन रहेछ, बचाउन सकिँदैन रहेछ ।’
के सिक्ने यो घटनाबाट ?
पुष्कर दम्पतीको इहलीला सकियो । पहिलो, समयमा उद्धार भएन । डेरामा बस्नेहरुको जीवन यस्तो असुरक्षित छ । धन्न ग्यासको सिलिण्डर विस्फोट भएन र अर्को भवितव्यबाट जोगियो । दोस्रो आगोले पोलेका बिरामीको किड्नी र शरीरमा पानी कम हुने भएकाले पहिलो उपचार स्लाइन पानी दिनु पर्छ ।
तेस्रो काठमाडौं उपत्यकामा आगोले पोले अरु अस्पताल नलगी कीर्तिपुर अस्पताल लैजानु पर्छ । तर त्यही सरकारी अस्पतालमा ‘डायलाइसिस’ सेवा छैन । इञ्जिनियर भट्टले भन्नुभयो, ‘यस्तो घटना रेयर हुन्छ, तर सरकारी अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा भइदिए उत्तम हुन्छ ।’ हामीकहाँ अस्पतालबाट एयर एम्बुलेन्समा भारत लैजानु पनि जोखिम छ । पलपलमा ‘यसो भएको भए बाँच्थ्यो कि भन्ने’ पीडामा आफन्त र परिवारले पुष्कर दम्पतीलाई सम्झिरहनेछन् ।
Tagged इञ्जिनियर सिभिल इञ्जिनियरिङ
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्न २५० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण
समृद्धिबाटै समाजवादी क्रान्तिको नयाँ बाटो समाजवादमा – अध्यक्ष दाहाल
रुकुममा नगरपालिकाका मेयर चढेको गाडी दुर्घटना, मेयरकाे अवस्था गम्भीर
April 17, 2018 खबर खुराक
उपभोक्ता ठगिएको प्रति गुल्मी नेविसंघ र तरुणदल द्वारा ज्ञापन पत्र
प्रहरीले च्यातेर फ्याँके निर्मलाका लागि न्यायको माग राख्दै टासिँएको पोस्टर
December 1, 2018 December 1, 2018 खबर खुराक